Siiqqota gara kutaatti sarara tarsaa moggaasuun jijjiiruu dandeessa. Kun ilaalcha taattoo fooyya'aa argachuuf eeyyama, irra caalattuu yommuu taattoo guddaatti fayyadamtu. Siilloon Y tarsaa buraalaa durtiittin kaka'a.
Kabala dhangii irraa,
Siilloo akka tarsaa buraalaatti qindeessuf hiika.
Taattoo sarara tarsaa siilloo X ti ida'a.
Taattoo sarara tarsaa siilloo Y ti ida'a.
Taattoo sarara tarsaa siilloo Z ti ida'a. Filannoon kun kan dalagu yoo taattoo 3D hojjette qofa.
Siilloo hundaaf tarsaa mandhoo moggaasuuf bal'ina kana fayyadami. Siilloo tarsaa mandhootti moggaasuun fageenya tarsaa buraalaa gidduu jiru hir'isa.
Sarara tarsaa kan qoqoodama siilloo X gara kutaa xixxiqaati ida'a.
Sarara tarsaa kan qoqoodama siilloo Y gara kutaa xixxiqaati ida'a..
Sarara tarsaa kan qoqoodama siilloo Z gara kutaa xixxiqaati ida'a.. Filannoon kun kan dalagu yoo taattoo 3D hojjette qofa.